Wasiirkii Kalluumeysiga Puntland oo shaqadii laga joojiyay | KEYDMEDIA ONLINE
Wasiirkii Kalluumeysiga Puntland oo shaqadii laga joojiyay
Ku simaha Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ahna madaxweyne ku xigeenka ayaa shaqo joojin ku sameeyay Wasiirkii wasaaradda Kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee Puntland.
GAROOWE, Soomaaliya - Madaxweynaha ku xigeenka Puntland, ahna ku simaha Madaxweynaha Axmed Cilmi Cismaan (Karaash), ayaa shaqo joojin ku sameeyay Wasiirka Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Khayraadka Badda Eng. Maxamuud Xaaji Saalax iyo sidoo kale Agaasimaha guud ee wasaaradaas Cabdirisaaq Jaamac Taraag.
Shaqo joojinta ayaa timid, kadib markii la xallin waayay, khilaaf xooggan oo mudoooyinkii u dambeeyay ka dhex taagnaa Wasiirka iyo Agaasimaha guud ee wasaaradda, kaas oo ku saleysan arrimaha maaamulka wasaraadda, islamarkaana gaaray in gacan ka hadal uu dhexmaro labada mas’uul wasaaradda ka wada tirsan.
Madaxweynaha ku xigeenka Puntland ayaa isku dayay in uu uu usameeyo kulan dhex-dhexaadin ah labada mas’uul, si uu khilaafkooda loo xalliyo, balse kuma uusan guulaysan dadaalkiisa, taasina waxay keentay in uu shaqa joojin ku sameeyo wasiirka iyo Agaasimaha Guud ee wasaaradda.
Madaxweyne Siciid Deni ayaa ku maqan safar dibadda ah, waxaana howsha sii wada ku simaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cilmi Karaash.
Warro dheeraad ah oo aan la xaqiijin ayaa waxay sheegayaan in wasiirka Wasaaradda uu qorsheynayo in uu iska casilo xilka Wasaaradda mar haddii isaga iyo Agaasimihii Guud ay is qabteen, ku simihii madaxweynahana uu shaqadii ka joojiyay.